Turkiga oo uga digay Greece dhoolatuska milatari ee gudaha badda Aegean - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldTurkiga oo uga digay Greece dhoolatuska milatari ee gudaha badda Aegean
February 4, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Turkiga oo uga digay Greece dhoolatuska milatari ee gudaha badda Aegean. [Sawirka: Archive]
Ankara-(Puntland Mirror) Wasaaradda arrimaha dibada dalka Turkiga ayaa uga digtay Greece howlaha milatari oo uu ka wado gudaha jasiirada Kos ee badda Aegean-ka.
Waraaq email-ah oo saxaafada loogu jeediyay gudaha Ankara Jimcadii shalay, ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibada Turkiga Huseyin Muftuoglu uu u ka codsaday haayadaha Greece in ay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah.
Huseyin Muftuoglu ayaa u jeediyay xukuumadda Athens in aysan qaadin wax tilaabo ah taasoo sii siyaadin karta xiisada u dhaxaysa labada dal ee dariska ah.
“Waxaanu u jeedinaynaa dariskayaga Greece in ay joojiyaan wax walba oo ah tilaabo aan si fiican looga fiirsan oo carqalad ku keenaysa sharciga caalamiga ah kaasoo sababi kara qalalaase,” ayuu yiri.
Waxa uu sheegay in Ankara ay qaadi doonto dhammaan ficilada saxda ah si ay u difaacdo xaqa ay u leedahay badda Aegean.
Khamiistii lasoo dhaafay, qeyb kamid ah saxaafada Greece ayaa ku warantay in Greece ciidamo ka socda ay tageen jasiirada Kos ee kutaala badda Aegean, taasoo carqalad ku ah heshiiskii nabada ee Paris, oo mamnuucaya wax walba oo howlo milatari ah oo laga sameeyo gudaha jasiiradaas u dhaxaysa labada dal ee Turkiga iyo Greece.
July 16, 2016 RW Turkiga oo sheegay in 2,839 xubnood oo askar ah la qabtay kadib afgembigii dhicisoobay